Farmaajo oo lagula taliyey inuu laba arrin midkood ku xaliyo xaaladda Dalka ka jira. - Awdinle Online
Home News Farmaajo oo lagula taliyey inuu laba arrin midkood ku xaliyo xaaladda Dalka...
Farmaajo oo lagula taliyey inuu laba arrin midkood ku xaliyo xaaladda Dalka ka jira.
October 15, 2019 (AO) – Maalmahan dambe waxaa isa soo tarayaa talooyinka loo jeedinayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaas oo ku saabsan dejinta iyo xal u helista xaalada sii xumaaneysa ee maamulka Jubbaland.
Wasiiro, Siyaasiin, Aqoonyahaano iyo Masuuliyiin ka tirsan golayaasha Baarlamaanka iyo Xukuumadda ayaa la sheegay in Madaxweyne Farmaajo kala hadleen xaaladda Jubbalanad islamarkaana ay siiyeen talooyin ku aadan xaaladda Jubbaland.
Talooyinka wax ku ool ka ah ee loo soo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka koobnaa laba qodob sida ay noo sheegeen masuuliyiin ka tirsan xubnihii la kulmay madaxweyne Farmaajo.
Shabakadda Awdinle Online ayaa heshay xog ku saabsan talooyinka Madaxweynaha loo soo jeediyay oo kala ah.
1) – Inuu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu tago magaalada Kismaayo kadibna uu ogolaado doorashadii ka dhacday Kismaayo lana heshiiyo Jubbaland, isagoo qiranaya in uu qalad ka dhacay labada dhinac haddana la saxayo.
2) – Inuu Cayriyo Ra’iisul Wasaaraha iyo Xukuumadiisaba kuna eedeeyo wixii qalad ah oo dhacay oo uu isaga iska fogeeyo ka dibna uu ogolaado doorashadii wixii sixid u baahana laga saxo Jubbaland.
Madaxweynaha Dowladsa Federalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa la sheegay in uu qaatay talooyinkii loo soo jeediyay balse lama hubo in uu fulin doono iyo inkale.
Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay fadeexad kala kulantay khalaasaha ka jira Jubbaland, wixii ka dhacay koonfur galbeed, arimaha galmudug, doorashiiyinkii puntland, dib habeynta hirshabeele, iyo Soomaaliland.
Waxaase loogu baaqay in ay dib u eegis ku sameyso arrimaha jira oo dhan, taas oo ku xiran maslaxaddda Soomaaliya.
Previous articleIMF Flawed Approach to Somalia Masks Deep Governance Failure (Prove Doc’s)
Next articleDad Ku Ganacsanada Khamri oo Dhuusamareeb lagu Bandhigay